Los Angeles munaJune - Zvaunotarisira uye Zviitiko zvegore negore
Los Angeles muna June
01 ye 04
Zvinhu Zvokuita muLos Angeles munaJune
Mune dzimwe nzvimbo vanoziva kuti ndiJune muLa apo jacaranda miti inotumbuka. Chris Eason / Flickr / CC BY 2.0
June muLos Angeles mutsvuku, ruvara fo ruzivo rwemaJacaranda miti - uye muna June Guru guru kana fog inopinda mumhenderekedzo yegungwa.
Iwe uchange uine maawa masere ezuva masikati nezuva kuti uongorore Los Angeles munaJune.
Guva Guru reJune
MuUnited States, Zuva raBaba rinochengetwa musi weSvondo wechitatu munaJune. ShandisaiCalifornia Baba's Day Guide kuti muwane pfungwa dzinofadza dzekuti baba vababa vakanaka zvinonakidza kupfuura kumutengesa tie.
Los Angeles 'Best June Zviitiko: Zvirongwa
Iyi ndiyo mhinduro shoma yezvinhu zvandakaita ini uye ndakakurudzira kune shamwari dzangu kana vachienda kuLa muna June.
Mutambo weBlayboy Jazz kuHollywood Bowl: Kugadzirwa kwemajereti ejaizz panguva ino yejazz fest inoshamisa - uye usiku kuBhodl nguva dzose inofadza.
Los Angeles Film Fest: Zuva reJune Independent raJune rinopemberera mweya wevanopanga mafirimu vanozvimirira.
Zvinhu Zvinoita Sezvokufadzwa Kuita Muna June
Ndiri kugoverana neRAC rangu rondedzero pano, kusarudzwa kwezviitiko nezvinhu zvekuita zvinoratidzika kufara.
G ay Pride Mhemberero : Mhemberero huru yechiitiko ichi chinoitika kuWest Hollywood uye inosanganisira kuronga.
Rodeo Drive Inobvumirana neElection: Imwe yenyika inotora vatori vemotokari inoratidza, inobata paZuva raBaba
Hollywood Fringe Festival: Ndiyo mhando yega-ye-yose iyo basa rayo rinofanira kuva chikwata chevatapi vasina zvipingamupinyi zvekuita. Iwe unogona kuona marudzi ose ekugadzira-makumbo ekuita zvigadzirwa, kusanganisira yemitambo, comedy, nemimhanzi
Pasadena Chalk Festival: Unbelievable art pane patsoka dzako. Zvinhu zvakasikwa kubva kune vane tarenda vane ruzivo rwemifananidzo yakaisvonaka yakagadzirwa kubva kune chaki ichakurova iwe, uye hauzotongotarisi bhokisi rekiki rimwechete zvakare.
Veuve Cliquot Polo Classic: Yakagadzwa kuDol Rogers State Park, iyi inofadza-schmancy chiitiko chinosanganisira champagne uye iyoyo yemutambo: polo.
Pakupedzisira Zvigaro Zvigaro: Rhepfenyuro yaRA Conservancy yegore negore yemapurogiramu ekare anowanikwa mumasitori ezvakaitika kare eDowntown Los Angeles. Zvimwe zvezvivako zvemafirimu ekare hazvisati zvasununguka kuvanhu, uye mutambo wefirimu inogona kuva ndiyo chete nzira yaunowana kuti uone iyo dzakanaka mukati-kati kubva panguva yegoridhe yekuenda-mafirimu-kuenda.
Zvinhu Zviri Kunyanya Kufara Mumwedzi waJune
Playboy Jazz kuHollywood Bowl. WireImage / Getty Images
Mazuva echando ezuva uye kusviba kwemazuva ano kunounza mhando yezvinhu zvinonakidza manheru. Iwe unogona kuenda kumafirimu panze, ona mutambo, enda kukorodhi - kana kusarudza zvimwe zvezviitiko zveLA zvisingawanzoitiki usiku. Tora pfungwa pano .
Kuramba kusvika munaAgustasi inguva yeimwe chinhu chakasiyana-siyana kuSouth California, gore negore rinosangana. Zviuru zviduku zviduku, zvesirivha-zvinoputira mujecha munguva yegore rose (kana kuti idzva). Ona purogiramu. Kune dzimwe nzvimbo dzeLos Angeles, "Grunion Greeters" vari pedyo kuti vatsanangure uye vakubatsire kuwana zvakanakisisa kuvapo.
MuLAN, iwe unogona kuona nyangadzi kudarika gore rose: grey nyangadzi muchando uye bhuu bhururu mumwedzi yezhizha. Tsvaga nzvimbo dzakanakisisa kuti uzvione uye apo uri mumabhuku ekuLos Angeles whale kutarisa uye Orange County whale kutarisa .
Zvimwe Pamusoro peLos Angeles munaJune
Talbot 1938 Teardrop SS 150 paRodeo Drive Kupikisa d'Elegance. Marty B / Flickr / CC BY-SA 2.0
Zvaunotarisira kubva kuLos Angeles Weather muna June
Pakutanga kwezhizha kunounza matenga maduku akajeka mukati megore nekuda kwemhashu yegungwa, asi iwe unoramba uchiwana zuva kupfuura hafu yenguva. Nenguva yemvura inonaya, pane mikana shoma yekudonha. Manheru emanheru anouya pakarepo uye anogona kunzwa anonyanya kupisa.
Izvi zvinowanzoitika kashoma kudarika zvaakaita makore mashoma apfuura, asi pamazuva akaipa, hunyoro mumhepo hunogona kusanganiswa nezvinosvibisa uye hunochinja.
Average High Temperature: 77 ° F / 25 ° C
Avhareji Yakazara Kutsigira: 60 ° F / 16 ° C
Rain & Clouds Index: 0.08 inches (0.2 cm) mvura, 80% zuva
Shandisa mamiriro ekunze kuti uwane pfungwa yezvinhu zvingave zvakaita, asi zvinogona kunge zvakasiyana paunoshanyira. Zuva rechando rinogona kunge rakanyorova iwe unoshuva kuti iwe uise zvidzitiro zvako. Uye-zvechokwadi - chengetedza izvozvi, zvakare.
Chii chaunofanira kutakura, Chii chokupfeka munaJune
Zuva reku Movie Movie Screening paCinespia. Joe Scarnici / Getty Images
MunaJune, Los Angeles maruva nzvimbo inowanzotarisa kubhururuka kunowanzoitika apo gungwa remhepo rinopisa rinogara mukati. Inonzi "June Gloom" nokuda kwechikonzero, inogona kuchengetedza zuva zuva rose zuva rose. Inochengetedza chinhu chinyararire uye chinopisa, uye-uye iwe uchafara kuti wakaunza iyo imwe yepamusoro kana iwe uri kunze kwayo. Usafunga kuti iwe unogona kutsika shisi yezuva kunyange: iyo inokonzera UV rays ichiita kuti iite mumakore ose aya akanaka.
Kunyange kana rima raenda, takura jekete yemadekwani pedyo nemvura. Shirts-sleeved shirts uye shangu dzisina kusimba dzakanaka kwazvo nguva uye zvidzitiro zviri nyore, kunyanya kure negungwa.
Zvimwe Zvimwe Zvingaitwa muLos Angeles neMwedzi
Kana uri kuedza kuverenga mwedzi wakanakisisa weL LA rako zororo, nguva ipi zvayo ichava yakanaka. Iwe unogona kushandisa mazano edu emwedzi nemwedzi kuti uwane zvakawanda pamusoro pezviitiko uye chii chatingatarisira gore rose.
MuR, mazhizha ndiDecember , January , uye February . Dzimwe nguva kunaya, asi zvisinei, denga richajekesa uye zuva. Mushure memugumo wegore rezororo, zvitsva zvichava zvishoma zvishoma.
Gore remwaka rinotanga muna March uye rinopfuurira munaEpril naMay . Zviratidzo zvemasikati hazvina maturo, asi mamiriro ekunze anowanzova akanaka - uye kunze kwekupera kwekupedzisira, zvikwangwani zvisati zvanyanyisa kuderera, kusvika pakupera kwevhiki kwezororo pakupera kwaMay.
Zhizha rakabatikana nemwaka rinotanga muna June. Saizvozvowo anotya "June gutu" iyo inogona kuchengetedza nzvimbo dzegungwa nzvimbo dzese zuva rose. Inogona kuwedzera muna July , zvakare. Pakazosvika August ichave ichipisa-dzimwe nguva inopisa zvikuru uye yakajeka.
Mhenderekedzo muLos Angeles inogona kunzi "marwi matsvuku" apo marara ane ruvara rutsvuku ari kukura zvakanyanya zvokuti "anotumbuka," kuisa mvura mumugwagwa. Iko kusatarisira chokwadi, uye zvakachengeteka kuti usashambira pavari kuitika. Tsvaga zvose zvaunoda kuti uzive nezvemashure matsvuku pano .
Mushure memwedzi mukuru weSeptember , zvinhu zvakanyarara. Mamiriro ekunze acharamba akanaka muna Oktober uye nguva yekambani yekunze inopinda mukati memwedzi. November yakasiyana. Dzimwe nguva zvakafanana nokuwa uye dzimwe nguva kufanana nechando.
Kuratidzwa Kwebhasi muLa neHollywood
Los Angeles Local History Museums
Los Angeles muna December
Zvinhu Zvokuita kuManhattan Beach: Kwezuva kana kwevhiki
Public Oscar Parties uye Zviitiko muLos Angeles
Krisimasi Caroling uye Masangano muLos Angeles 2016
New Zealand Kutarisa Kutya kweNorth Island
Miami Mari Yokuvhara Kwekushandisa Kutenga
Pamusoro Museums muSeattle / Tacoma
Zviitiko neIndaneti yeScandinavia munaAugust
Fogo de Chao Inopa Zvokudya zveBrazilian zvekare muIndiapolis
Zviitiko Zvakanakisisa Zvepachena muParis: A Complete Guide
Zororo Rinoenda Maawa Maawa matanhatu kubva kuDenver
Milwaukee Vote Central
Crissy Field ku Fort Point: San Francisco's Most Scenic Walk
Mitsara inobatsira yeGerman yeTereji Kurwendo
Kutarisa Kupfuura Minh Mang Royal Tomb muHue, Vietnam
Kwokuenda kuItaly Riviera kubva Genoa kusvika kuCinque Terre